Lany ny vola sy tahirim-panjakana ka dia any amin’ny hafa no mandroba toy ny Jirama, Caisse d’Epargne. – MyDago.com aime Madagascar
Lany ny vola sy tahirim-panjakana ka dia any amin’ny hafa no mandroba toy ny Jirama, Caisse d’Epargne.
Tamin’ny kabarin’ny depioté Zafilahy androany tetsy amin’ny Magro no nilazany fa miaiky ny FAT fa tsy tana ny « explosion sociale » izay hitarika tsy fandriampahalemana kokoa. Dia ezahana tazomina mafy ny vidin-tsolika nefa ny mpaninjara soloika maro no efa nikatona, terena daholo ny zavatra rehetra ; dia mitady zavatra hisaritana ny saim-bahoaka, hanadinony ny fahoriany toy ny « écran géant » ankehitriny ny FAT hoy Zafilahy. Tsy ilaina izany vonjy tavanandro izany fa fanasitranana maharitra no ilaina ary izany no hitolomantsika ankehitriny. Ny isan-tokatrano mihitsy no nihezahan’i Ravalomanan mba ho tsaratsara.Tsy izahay mpitarika koa no te ho eto ihany koa fa ny vahoaka mihitsy no tsy manaiky, zavatra tsy maintsy natomboaka koa atsy maintsy faranana.
Tsy ekena raha ho toy ny any Lafrantsa ny fahasahiranana amin’ny resaka fampianarana eto. Mody hatao maimaipoana avokoa dia ahoana ny ho karaman’ny mpampianatra? hoy hatrany izy nandahan-teny.
Mitaky ny famerenana ny fiara prado ny Unicef dia havadika zavatra hafa aingana, mbola vao Unicef izany fa ho avy ny fitakin’ny UA tamin’ireo fiara tokony nampiasana tamin’ny sommet.
Isika dia tsy mangataka ny fiverenan’i Ravalomanana intsony fa miandry sisa. Ny FAT no miasa loha ary na dia mbola hanaratsy isan’andro any ny filoha aza ho sasapoana izy ireo, hoy ity solombavambahoaka voafidy tany Vavatenina ity.
Nisy zavatra heno avy any amin’ny Sadc-Troika navoakan’i Tsianihy, milaza fa i Ravalomanana no tsy mety mody, magro no tsy mety mivoaka fa izahay mamela ka rahampitso
taontsika hoatran’ isan’andro ny eto dia avy eo milahatra milamina isika .
Auteur Solo Razafy*Publié le 9 septembre 2011 9 septembre 2011 Catégories Politique
5 pensées sur “Lany ny vola sy tahirim-panjakana ka dia any amin’ny hafa no mandroba toy ny Jirama, Caisse d’Epargne.”
Avelao ny fat jivovoa sy hikiaka irery !
Tsy mila valiana ny volany , satria volan ‘olona tsy ampy saina !
Maro ny adidy miandry Antsika ka tokony hiomana tsara Isika hisahana azy ireo !
Ny fiverenan’ny ara-dalana dia tsy ho mora ny hiaina amin ‘ izany mba tsy hatahotatra intsony , mba tsy hihorohoro intsony , nefa koa aoka tsy avy hatrany dia hiombona na hifandray amin ‘ny olona tsy fantatrao..!
Hisy tokoa mantsy avy hatrany dia misakambina , manoroka Anao izay fantany tsara fa nanaraka ny fivoriana tao Behoririka foana..KOA MITANDREMA !
Ataontsika izay hahalavorary ny fodian ‘ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,ka na misy mpiambina aza izy dia SOKAFY NY SOFINAO , AHIRATO NY MASONAO ARY AKOMBONY NY VAVANAO ,satria tsy ho fantatrao daholo ireo MANOHANA ary ireo TSY TIA AZY !
Ny fitsenana azy ny IVATO dia tsy misy olana fa ny fiainany an-davan ‘andro no mila famaodimaodiana ! Isika no afaka manao izany , ary ny olona voafidy hanao izany dia tsy ilaina haretirety fa misoko mangina !
Ny fanapahin-kevitry governemanta provisoire dia tokony harantsika maso ny fampiarana azy ireny : ohatra ny fizaram-bary : zara mitovy tsara ve , voatantitra tsara ve izany hoe teana tonga any amin ‘ny Vahoaka ( fokontany) tsara ny lanjan ‘ny vary nalefa ! OHATRA IZANY )
Santionany kely ireo nomeko ireo fa mino aho fa azonareo ny tiako lazaina !
KOA MAHEREZA DAHOLO ! MITOHY NYTOLONA !
Tsy mety mody ahoana ny Dadanay? Efa vonona ny ho avy izy t@ volana febroary saingy matahotra mafy ny fat nahita ny olona marobe nitsena azy tany Ivato, ary ngamba latsaka mbamin’izay tsy ho latsaka de nanaovana Notam izay tsy fantatra akory ny dikany nisakanana azy ka hoe tsy mety aho tsy mety mody! avadiho impito ry tsianihy ny lela vo miteny ah!
Tokony hifantoka amin ‘ ny marina Isika ary tsy mil mifamaly na mamaly ny very saina fa ohatrany manome « importance » ny fivolany Isika! Avelao izy hivovoa irery, hikiakiaka irery !
Ataontsika izay hahalavorary ny fiomanantsika hiatrika ny fiverenan’ny ara-dalana sy ny fodian ‘ ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,satria ho maro ireo problèmes miandry Antsika nefa tsy maintsy ho sahanintsika ary tsy maintsy hahitana solutions !
Aoka ho maody Isika KOA SOKAFY NY MASONAO ! ATONGOLANY NY SOFINAO ARY FEHEZO NY VAVANAO sareia tsy fantatrao daholo izay MANOHANA NY FILOHA ARY TSY HAINAO KOA IREO SY TIA AZY !
KOA MITANDREMA AMIN ‘ IREO OLONA ISARIAKA BE AMINAO NEFA TSY FA?NTATRAO IZY IRENY NA IZA NA IZA FA IZU METY MAHAFANTATRA FA IANAO DIA MPIVORY MAZOTO AO BEHORIRIKA !AZA MIADY FA DINIHO TSAEA IZY ARY IALAO MORAMORA !
Z3ava nisy teto frantsa , tany allemagne , tany belgika izany ; ireo niray tsikomkoba ramin’ny nazis dia nitady nanadio tena ary any heriny dia nanao izay nifandraisany tamin ‘ ireo mponina nijaly noho ny nataon ‘ny nazis izay niarahan ‘ireto » ollaborateurs « !
10 septembre 2011 à 17 h 21 min
Manahy mafy ny aty an-tanàna hoe hanao ahoana ny fahavaratray (miakina @ jirama io): izao aza vao misy pitik’orana kely dia tapaka ny jiro
Raha tena fahavaratra dia inoana marina HO TOA NY FARANY teo: napoapoaky ny court-circuit ny tao anaty ilay tranon-jiro: bouuummm be miaro éclairs
Ny entretien efa tsy mahomby, ny vola mbola lanian’ny minisitra @ sitrapony,
Mampalahelo ry HoAiza fa dia izao no atao hoe fanjakam-poza ê !
Nataony ampihi-mamba ny harenam-bahoaka, angalarina ny fananan’olon-tsotra !! Tsy maintsy atao ny ankety rehetra, fa tsy misy hijanona amin’izao fotsiny eo !
Précédent Article précédent : Ravao ny FAT ka omeo olon-kendry hoy ny Orimbato
Suivant Article suivant : Le rodobe de ce samedi 10 septembre